HomeWararka CiyaarahaParis Saint-Germain oo isha ku heysa xaalada Riyad Mahrez.
December 2, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka France, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Paris Saint-Germain ayaa lagu soo waramayaa inay si dhow isha ugu hayso xaalada Riyad Mahrez ee Manchester City .
30-sano jirkaan ayaa ku riyaaqay fursado qaali ah Champions League xilli ciyaareedkan, laakiin waxa uu kaliya ku soo bilowday afar ka mid ah 14-kii kulan ee ay ciyaareen Premier League.
Mahrez ayaa si aad ah loola xiriirinayay inuu ka tagayo Etihad xilli uusan si joogta ah ku bilowday, inkastoo uu hoos u dhigay xiriirka ka bixitaanka kooxda heysata horyaalka Premier League.
Si kastaba ha ahaatee, The Sun ayaa warineysa in PSG ay dooneyso inay Mahrez la soo wareegto sanadka 2022 hadii weeraryahanka Algeria uusan heshiis cusub ka gaarin Man City.
Mahrez heshiiska uu kula jiro Citizens waxa uu dhacayaa 2023, laakiin ciyaaryahankii hore ee Leicester City ayaa la filayaa inuu doonayo inuu sii joogo Manchester iyadoo City ay kor u qaadayso dadaalkeeda ay ku dooneyso inay heshiis cusub ka saxiixdo.
Mahrez waxa uu ku faanaa afar gool shan kulan oo uu ku soo bilowday xilli ciyaareedka 2021-22 Champions League, lakiin waxa uu kaliya dhaliyay labo gool iyo hal caawin 11 kulan oo uu saftay xilli ciyaareedkan.